Ko zvakadii nezve "Kutiza" kiyi pane iyo nyowani Macbook Pro Retina? | Ndinobva mac
Ko zvakadii nezve "Kutiza" kiyi pane iyo nyowani Macbook Pro Retina?
Mushure mekudonhedza nezuro husiku kwemifananidzo yakati wandei maunogona kuona kuti chii chaizvo chichava keyboard cheiyo nyowani MacBook Pro Retina maminetsi mushure memusangano wepamutemo weApple wezvemari, vamwe vashandisi uye vezvenhau vakashamisika ko nezve «kutiza» kiyi pamakomputa matsva izvo zvichavhurwa mangwana nekuti hapana kwazvinoonekwa. Pachinhu ichi hachifanirwe kunge chiri dambudziko kana tichifunga kuti tichava nechidzitiro chidiki (OLED kana inki yemagetsi) inogadziriswa zvizere ichibvumidza kuti ishandiswe pairi. Asi chero zvodii, kana chero wevaya varipo achida kuve neyakakosha kiyi yekutsikirira kuita "esc" zvinokwanisika kumisikidza iyo.Mukuona kuona iyi mifananidzo Sefa zuro masikati tinozviziva izvozvo kurudyi tichava neTouch ID sensor kuita kunyoreswa, kubhadhara, kuvhura iyo Mac kana chero rimwe basa nezvigunwe zvedu. Asi izvi zvinoita senge dambudziko risingatitenderi kuti tive nekiyi iyi senge mamwe makiyi eBasa (F1, F2, F3, nezvimwewo) muchikamu chiri iko diki skrini.
Kana isu tichiri kuda kuve nekiyi yemuviri kiyi iyi sarudzo, zvese zvatinofanirwa kuita kugadzirisa imwe kubva ku MacOS Sierra 10.12.1 Sarudzo dzeSystem. Kune izvi isu tichawana Yekhibhodi > Modifier makiyi ... uye isu tichachinja kiyi yakapihwa tichishandisa kudonhedza kunoonekwa kwatiri kune uyo watinoda. Ichokwadi ndechekuti zvinogona kunge zvichinetsa kujairira pakutanga, asi pachezvangu ndinofunga kuti izvi, semamwe ese mabasa, zvichave zviripo mubata rekubata basa uye kana zvisiri izvo tinogona kuzvimisikidza kune vedu kufarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Ko zvakadii nezve "Kutiza" kiyi pane iyo nyowani Macbook Pro Retina?
Tim Cook anozivisa kuti Artificial Intelligence haifanire kukanganisa hunhu
Mac, iPhone uye iPad kutengesa kuri kuramba kuchiderera. Apple zvemari mhedzisiro